Madaxweynaha Angola oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay Danjire Jamaal Barrow – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Angola Jose Eduardo dos Santos ayaa si rasmi ah waxaa uu waraaqaha aqoonsiga uga guddoomay Danjiraha Soomaaliya ee dalkaas Jamaal Maxamed Barrow ahna Danjiraha Soomaaliya u jooga Koofur Afrika.
Munaasabad kooban oo ka dhacday aqalka Madaxtooyada ayaa Danjire Jamaal waxaa uu Madaxweynaha Angola u gudbiyay dhambaal salaan uu uga siday Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Danjir Jamaal Maxamed Barroow ayaa kulan gaar ah la qaatay Madaxweynaha Dalka Angola Jose Eduardo Dos Santos, isagoo warbixin ka siiyay hormarka Soomaaliya ay ka sameysay dhinacayada Ammaanka iyo Siyaasadda.
Mr José Eduardo dos Santos, ayaa dhankiisa Ammaanay isabadalka Siyaasadeed ee ka billaawday Soomaaliya, isagoo sheegay in xiriir walaaltinimo oo soo jireen ah ay lahaayeen Soomaaliya iyo Angola.
Jamaal Maxamed Barroow, ayyaa noqonaya safiirkii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee dalka Angola, isagoo sidoo kale Sifiir ka ah illaa Shan Dal oo dhaca Koofurta Qaaradda Afrika.
Waa dalkii labaad oo Danjire Jamaal Barrow laga guddoomo waraaqihiisa aqoonsiga, sanadkii hore ayay aheyd markii Madaxweynaha Koofur Afrika Jacob Zuma uu warqadihiisa aqoonsiga ka guddoomay.
Ciidamo fara badan oo Itoobiyaan oo la geeyay deegaanka Halgan